19 | April | 2015 | Love Joshi
शैक्षिक जीवनका अनुभवहरु (३२ )
२०७२ वैशाख ५ गते शनिवार
जीवनको प्रथम गुरू हुन् – आमा
आज मातातीर्थ औंसी । आमाको मुख हेर्ने दिन । यस धर्तीमा सन्तानलाई जन्म दिने जननी । नौ महिनासम्म गर्भ धारण गर्ने । जन्म पश्चात लालनपालन गर्ने आमा । असंख्य रात सुत्दैनन् आमा ।आफ्नो स्वास्थ्यको परवाह नराखी सन्तानको सुखदुखमा साथ दिने । “बाबा” भन, “आमा” भन भनी भाषाको प्रथम चरणको सुनाइ-बोलाइको सीप सिकाउने आमा । यो गर्नु हुन्छ,त्यो गर्नु हुंदैन भनी नैतिक शिक्षा पढाउने आमा । जीवनकै प्रथम गुरू आमा । छोराको साथी । छोरीकी सखी । आमा । आमा । केवल आमा ।
मातृशक्तिलाई सतत् प्रणाम ।
आमा हुंनेहरुले यथोचित मान,सम्मान र कदर गरी शुभाशिष थापुन् । आमालाई सुख शान्ति दिन नसकेपनि दु:ख,कष्ट र पीडा नदिउन् । आफू सुख सयलमा बस्न बृद्धाश्रममा आमा राख्न नलैजाउन् । कोही पनि धिक्कारको पात्र नबनुन् ।
यस धरामा आमा नहुंनेहरुले आमाको प्रात: स्मरण गरुन् ।दान गरुन् ,खुवाउन् वृद्धालाई ।ब्राम्हणलाई सिदा दान गरुन् ।आमाको नामबाट छात्रवृत्ति स्थापना गरुन् । अन्य पुण्य काम गरुन् ।
वालपनमा चेतना नजागेसम्म आमा चिन्न सकिन्न रहेछ ।वाल मस्तिष्कमा आमाको आकृति नपरेसम्म आमाको परिकल्पना समेत आउन्न रहेछ । मान्छे सानै छँदा , अबोध हुंदाको बेलामा आमा खसिन् भने आमा सपनामा पनि आउँदिन रहेछ । आमाको सपना समेत देख्न सक्दैन रहेछ, मानिसले । मेरो यस्तै अनुभूति छ ।
आमाप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु ।
शैक्षिक जीवनका अनुभवहरु (३१ )
२०७२ वैशाख ४ गते शुक्रवार
चुनौती सामना गर्न प्रेरणा दिने नेता थिए सूर्य बहादुर थापा
आज सन्ध्याकालीन ध्यानमा एकाग्रचित्त हुन सकिएन । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाको देहावसानले वहाँको ब्यक्तित्वको झझल्को आई रह्यो । २०५६ को मध्यमा वहाँसंग भेट्ने इच्छा निजी सचिवसंग निवेदन गरें । दिउँसोको २ देखि २:३० सम्ममा १५ मिनटको समय मिल्यो । म १:४५ बजे नै पुगें ।म पत्रपत्रिका पढेर बसें । प्रतिक्षा कक्षमा धेरै कुर्नु परेन ।
” जोशी सर” भन्दै वहाँ कोठामा आउनु भयो । जुरुक्क उठेर “नमस्कार हजुर” भनी अभिवादन गरें ।हात बढाउनु भयो । अप्ठेरो र अचम्भित हुंदै हात मिलाएँ । न्यानो थियो हात । बसौं भन्नु भयो । बसें । शिक्षण पेसामा लागेको छोटो परिचय दिएँ । शिक्षा क्षेत्रका केही विषयमा कुरा गरें । चीया पनि आयो । फेरि अचम्म लाग्यो । राजनीति इतरको म मनुवालाई पनि चिया , मन मनै भने ।
” १५ मिनट त सकियो, हजुर।”
” गरौं कुरा मलाई हतार छैन, आज ।”
ब्यक्तिगत समस्याबारे पनि अवगत गराएँ । ध्यान दिएर सुन्नु भयो । भन्नु भयो, “हर कुरालाई राजनैतिक रंग दिइन्छ , अचेल । चुनौतिको सामना गर्दै गरेको थाहा पाएँ । डटेर लाग्नुस । सत्यमेव जयते।”
३० मिनट कुरा भयो । भेट्न पाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरें । अभिवादन गरें । विदा भएं ।
” आउँदै गर्नुस् ,है।”
“हवस् ” म झुकें ।
आज त्यो भेट स्मरण भएको छ । सामान्य मानिसलाई पनि न्यानो पनले भेटघाट गर्ने वहाँको शैलीले म प्रभावित छु ।छु । चुनौती सामना गर्ने हौसलाले म सधैं प्रेरित छु ।
शैक्षिक जीवनका अनुभवहरु (३० )
२०७२ वैशाख २ गते बुधवार
२०७१ को अन्तिम घडीमा महाकाली नदीमा चार किशोरीहरुले सामूहिक फाल हालेर जीवन लीला समाप्त पारे । २०७२ को आगमन भयो । शिक्षा जगतलाई थुप्रै प्रश्नहरु तेर्स्याएर ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई ती किशोरीहरुले चुनौती दिएर गए । विद्यालयको वार्षिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको कारण बन्यो तिनीहरुको जल समाधि । क्रुर आत्महत्या । नसोचिएको परिणाम् । कलकलाउँदो किशोरी जीवन हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सदाकोलागि चुंडालेर लग्यो । अपराधशाश्त्रको सिद्धान्त अनुसार जब ब्यक्तिले आफ्नो जीवनमा चारैतिर अन्धकारै अन्धकार देख्छ, प्रकाशको किरण कतै देख्दैन, तब उसले आत्महत्या वरण गर्दछ ।
के उनीहरुलाई विद्यालयले कुनै जीवन ज्योति देखाउन सकेन ? वाल मैत्री शिक्षण अपनाउनु पर्ने शिक्षकहरुले कुनै मनोवैज्ञानिक परामर्श दिन सकेनन् ? कि वालिकाहरु पक्षपातपूर्ण मूल्याँकनको शिकार भए ? एक-दुई हैन, चार- चार जनाले आत्महत्या गर्नु के संयोग हो ? के यसलाई भावीले लेखी दिएको भाग्यवाद भनेर पन्छिनु मिल्छ ? हैन भने मानसिक अवस्था ठीक नभएका किशोरीहरु भनी दिने कि ? के को लागि त्यो “कडा रिजल्ट ?” आगामी वर्षको एस.एल. सी. उत्तीर्ण प्रतिशत दर बढाउन हो कि ? कि शिक्षकहरुको अहं पूर्ति गर्न हो कि ? अनेक प्रश्नहरु स्वतह: उब्जन्छन् ।
हाम्रो शिक्षा परीक्षा प्रधान छ । सीप प्रधान छैन । उत्तरपुस्तिकामा लेखेकै आधारमा मात्र विद्यार्थी योग्य हुंने ? नत्र फेल ? परिणाम , परीक्षाकै नाममा जीवन वलिदान गरिन्छ ।
यो घट्नाबाट शिक्षाका नीति निर्माताहरुले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
शैक्षिक जीवनका अनुभवहरु (२९ )
२०७२ वैशाख १ गते मंगलवार
शुभकामना लेख्न सिकाउने
विद्यार्थीलाई कक्षामा पुस्तकमा आधारित पाठ मात्र पढाउने होइन अपितु पाठ्यक्रममा आधारित सीप पनि सिकाउने गर्नु पर्दछ ।
विभिन्न चाडपर्व , नव वर्ष , सफलता र जन्मोत्सवमा कसरी शुभकामना ,वधाइ र निमन्त्रणा लेख्ने भनेर प्रयोगात्मक कक्षा लिन सकिन्छ । यसो गर्दा विद्यार्थीहरु रुचि लिएर सहभागी हुन्छन्, सिक्छन् ।प्रभावकारी सिकाइनिमित्त एक-दुई दिन अगावै उनीहरुलाई सूचना दिएर तयारी गराउनु भने भुल्नु हुंदैन । यसो गर्नाले उनीहरु आवश्यक सामग्रीहरु – कागज, पोष्ट कार्ड, साइन पेन, कैंची, गम इत्यादि- जुटाउन सक्षम हुन्छन् ।
बोर्डमा एउटा नमूना लेखी दिनु पर्छ । कहाँ- कहाँ आफ्नै शब्द राख्न सकिन्छ, बताउनु पर्छ । १५ / २० मिनटको समय निर्धारण हुनु पर्छ । विद्यार्थीहरुले लेखेका, तयार गरेका नमूनाहरु एक-एक गरेर जाँचेर बिग्रेको ठाउँमा अण्डरलाइन गरी पुनर्लेखन गर्न लगाउनु पर्छ । पूर्ण रुपमा तयार नहुंन्जेल यो प्रक्रिया चलाइ रहनु पर्छ । नमूना तैयार भएपछि प्रोत्साहन जनाउने शब्द -Very good / Excellent / Supper लेखी शिक्षकले सही गरेर आमाबाबुलाई देखाउन भन्नु पर्छ ।
यही विधिबाट अन्य अवसरहरुमा पनि सिकाउने गर्नु पर्दछ । २ -३ पटकको Trial and error बाट बिद्यार्थीहरुले शुभकामना कार्ड लेख्न सिपालु हुन्छन् ।
शैक्षिक जीवनका अनुभवहरु (२८ )
२०७१ चैत ३० गते सोमवार
आफ्नो लामो विद्यालय शिक्षक जीवनमा ट्यूसनलाई अतिरिक्त कमाइको हतियार मैले कहिल्यै बनाइन । हुन त मेरो विषय अंग्रेजी हो । असहज विषय भन्छन् यसलाई धेरै विद्यार्थी र अभिभावकहरु । यस्तै गणित / अतिरिक्त गणित र विज्ञान पनि असहज विषय मानिन्छ ।अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षकहरुले ट्यूसन पढाइ विशेष रुपमा आय आर्जन गर्दछन् । मैले अंग्रेजीको ट्यूसन नपढाएको कारण निम्न छन् –
१ / टेयूसन पढाउने शिक्षक मूल्याँकन प्रक्रियामा निष्पक्ष हुंन सक्दैन ;
२ / कक्षा शिक्षणमा स्वस्फुर्त हुंन सक्दैन ;
३ / परीक्षामा निरीक्षकको भूमिकामा चुस्त रहन सक्दैन ;
४/ विपरीत लिंगप्रति आकर्षण बढ्दछ ;
५ / समयमा course पूरा गर्न सक्दैन तर ट्यूसनमा आउनेलाई प्रश्न चुहाइ दिन्छ ;
शैक्षिक जीवनका अनुभवहरु (२७ )
२०७१ चैत २९ गते आइतवार
गुणस्तरीय पढाइ हुने विद्यालयमा अभिभावकवर्गले लगानी गर्न हिचकिचाउँदैनन्
सामुदायिक होस् या निजी क्षेत्रको बोर्डिंग स्कूल होस् , यदि गुणस्तरीय पढाइ हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क भएमा अभिभावकहरुले आफ्ना नानीहरुलाई भर्ना गर्न ल्याउँछन् । सस्तो र महंगो शल्कको लेखाजोखा गर्दैनन् । राम्रो पढाइ र अतिरिक्त कार्यकलाप हुंने विद्यालय अभिभावकहरुका रोजाइमा पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुमा दृढ इच्छाशक्ति हुनु पर्दछ ।किनकि उनीहरु योग्य, तालिमे र अनुभवले पोख्त हुन्छन् । प्रधानाध्यापकले “Team spirit”/ समुहमा काम गर्ने वातावरण जगाउनु सक्नु पर्दछ । निष्पक्ष प्रशासन , मूल्याँकन र सुविधा प्रदान गर्ने कौशल देखाउनु पर्दछ ।